သူမရဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေ အထင်အမြင်လွဲမှားနေတဲ့ အချက်ကို​ရှင်းပြခဲ့တဲ့ ပိုးအိအိခန့် - TGI Daily News
ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်နိုင်ငံကျော်ဘောလုံးသမားအောင်သူနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုးအိအိခန့်တို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ မြင်သူတိုင်းအားကျရလောက်တဲ့ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုလေးကို တည်ဆောက်ထားသူတွေပါ။ အိမ်ထောင်ပြုပြီးနောက်ပိုင်း အနုပညာအလုပ်တွေဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့ ပိုးအိအိခန့်ကတော့ သားကိုးလေးကိုထိန်းကျောင်းရင်း လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပဲ ပရိသတ်တွေအတွက် တနေ့တာအကြောင်းအရာလေးတွေ မျှဝေပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ အနေတည်ပြီးရှက်တတ်လွန်းတဲ့ အောင်သူရဲ့အကျင့်ကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ “အိမ်ထောင်ကျပြီး သိပ်မကြာ ကျွန်မကို ကိုအောင်သူ့အမေ က ပြောပြဖူးတယ်… ဘောလုံးပွဲကြည့်တိုင်း ဘေးကပရိသတ်တွေက အောင်သူ့ကို မာနကြီးတယ် မတူသလို မတန်သလိုဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြလို့… သားကို အမြဲမှာတယ်တဲ့… ဘယ်လိုမှာတာလဲဆိုတော့
“သားရယ် ဘောလုံးကွင်းထဲရောက်ပြီဆိုရင် ခေါင်းလေးမော့ပြီး လက်လေး ပြလိုက်ပါ သားလက်ပြတာ မောင်ဖြူ့ကိုလည်း မဟုတ် မောင်နီ့ကိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးသားရယ် အဲ့ဒါလေးတော့ လုပ်ပြလိုက်ပါ ငါ့သားရဲ့” ဘယ်လောက်မှာမှာ ပွဲရောက်လို့ ကြည့်လိုက်ရင် သိပ်ရှာစရာမလိုဘူး ခေါင်းငုံ့နေရင် အောင်သူပဲ တဲ့…. အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်မ ယောကျာ်းကို မတက်ကြွဘူးပြောရင် ကျွန်မ ရယ်လည်း ရယ်ချင်သလို စိတ်လည်းမကောင်းဘူး… လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်နဲ့ဗီဇက ဘယ်လိုများဖျောက်လို့ရပါ့မလဲရှင်” ဆိုပြီး အောင်သူရဲ့အကျင့်ကို ပြောပြခဲ့တဲ့အပြင်
အောင်သူ ဘယ်လောက်များပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်မနေတတ်သလဲဆိုရင် မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာတောင် လူတွေအရမ်းများလွန်းလို့ ရှက်ပြီး မျက်နှာတည်နဲ့မနေတတ်ဖြစ်နေလို့ တချို့လူတွေကတောင် အောင်သူကမပျော်ဘူးလား… မချစ်ဘူးလား မေးကြတဲ့အထိပါပဲတဲ့.. တကယ်တော့ ကျွန်မယောက်ျားက ကျွန်မကို အရမ်းချစ်ပါတယ်ရှင်.. ဒီစာလေးဖတ်ပြီးယောက်ျားပျော်ပါစေ” ဆိုကာ သူမခင်ပွန်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး အမြင်လွဲမှားနေတဲ့အကြောင်း ပြောပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ခငျပှနျးနဲ့ ပကျသကျပွီး ပရိတျသတျတှေ အထငျအမွငျလှဲမှားနတေဲ့ အခကျြကိုရှငျးပွခဲ့တဲ့ ပိုးအိအိခနျ့
ပရိသတျရဲ့အခဈြတျောနိုငျငံကြျောဘောလုံးသမားအောငျသူနဲ့ သရုပျဆောငျပိုးအိအိခနျ့တို့ ဇနီးမောငျနှံကတော့ မွငျသူတိုငျးအားကရြလောကျတဲ့ ပြျောရှငျစရာမိသားစုလေးကို တညျဆောကျထားသူတှပေါ။ အိမျထောငျပွုပွီးနောကျပိုငျး အနုပညာအလုပျတှဆေကျမလုပျဖွဈတော့တဲ့ ပိုးအိအိခနျ့ကတော့ သားကိုးလေးကိုထိနျးကြောငျးရငျး လူမှုကှနျရကျပျေါမှာပဲ ပရိသတျတှအေတှကျ တနတေ့ာအကွောငျးအရာလေးတှေ မြှဝပေေးလရှေိ့ပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ အနတေညျပွီးရှကျတတျလှနျးတဲ့ အောငျသူရဲ့အကငျြ့ကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ “အိမျထောငျကပြွီး သိပျမကွာ ကြှနျမကို ကိုအောငျသူ့အမေ က ပွောပွဖူးတယျ… ဘောလုံးပှဲကွညျ့တိုငျး ဘေးကပရိသတျတှကေ အောငျသူ့ကို မာနကွီးတယျ မတူသလို မတနျသလိုဖွဈတယျလို့ ပွောကွလို့… သားကို အမွဲမှာတယျတဲ့… ဘယျလိုမှာတာလဲဆိုတော့
“သားရယျ ဘောလုံးကှငျးထဲရောကျပွီဆိုရငျ ခေါငျးလေးမော့ပွီး လကျလေး ပွလိုကျပါ သားလကျပွတာ မောငျဖွူ့ကိုလညျး မဟုတျ မောငျနီ့ကိုလညျးမဟုတျပါဘူးသားရယျ အဲ့ဒါလေးတော့ လုပျပွလိုကျပါ ငါ့သားရဲ့” ဘယျလောကျမှာမှာ ပှဲရောကျလို့ ကွညျ့လိုကျရငျ သိပျရှာစရာမလိုဘူး ခေါငျးငုံ့နရေငျ အောငျသူပဲ တဲ့…. အဲ့ဒါကွောငျ့ ကြှနျမ ယောကျြားကို မတကျကွှဘူးပွောရငျ ကြှနျမ ရယျလညျး ရယျခငျြသလို စိတျလညျးမကောငျးဘူး… လူတဈယောကျရဲ့ အကငျြ့နဲ့ဗီဇက ဘယျလိုမြားဖြောကျလို့ရပါ့မလဲရှငျ” ဆိုပွီး အောငျသူရဲ့အကငျြ့ကို ပွောပွခဲ့တဲ့အပွငျ
အောငျသူ ဘယျလောကျမြားပွုံးပွုံးရှငျရှငျမနတေတျသလဲဆိုရငျ မင်ျဂလာဆောငျတဲ့နမှေ့ာတောငျ လူတှအေရမျးမြားလှနျးလို့ ရှကျပွီး မကျြနှာတညျနဲ့မနတေတျဖွဈနလေို့ တခြို့လူတှကေတောငျ အောငျသူကမပြျောဘူးလား… မခဈြဘူးလား မေးကွတဲ့အထိပါပဲတဲ့.. တကယျတော့ ကြှနျမယောကျြားက ကြှနျမကို အရမျးခဈြပါတယျရှငျ.. ဒီစာလေးဖတျပွီးယောကျြားပြျောပါစေ” ဆိုကာ သူမခငျပှနျးနဲ့ ပကျသကျပွီး အမွငျလှဲမှားနတေဲ့အကွောငျး ပွောပွခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ချစ်ရတဲ့သမီးလေးရဲ့ (၄) လပြည့်မွေးနေ့လေးကို ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ အာဇာနည်
မေကဗျာ ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် စီးပွားရေးတွေ ပြေလည်သွားလို့ မျက်ရည်ဝဲ ခဲ့ရတဲ့ အဆိုတော် မိုးမိုး တို့ ဇနီးမောင်နှံ
မွေးစကတည်းက ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ မြေးမလေးကို Video Callနဲ့ကြည့်ပြီး မိသားစုဝင်တိုးလို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ခင်လှိုင်တို့မိသားစု
ချစ်သူသက်တမ်း (၇) နှစ်တိုင်တိုင် လက်တွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ မောင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူ